CINJIRKA LO'DA, AMA MASAAFO: SHARRAX LEH SAWIR IYO TAARIIKH DHACDO, SIFOOYIN FAA'IIDO LEH IYO MUUQAALADA KALA DUWAN, CALAAMADAHA, CODSIGA IYO XAALADAHA URURINTA - BEER CAGAARAN
Salaaxa dufan ee waxtar leh ama waxyeelo leh? Guryaha dhirta, khatarta iyo cuntooyinka caanka ah
Caleen caan ah ayaa loo yaqaan 'compass', sababtoo ah caleemuhu waxay leeyihiin hanti xiiso leh - oo leh geesaheeda iyo dhammaadka waxay tilmaamayaan inay si adag u tilmaamayaan qaybaha waqooyiga iyo koonfurta ee adduunka.
Geedka waxaa ku jira juice caan ah cad, sifooyinka sunta ah kuwaas oo loo isticmaalo daawada dhaqanka sida suuxdinta, anti-bararka iyo hypnotic.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa calaamadaha iyo khilaafaadka ku saabsan qaadashada salaar duurjoog ah, iyo sidoo kale dhowr cunto caafimaad. Natiijooyinka soo-ururinta iyo iibsashada geedkaan waxaa lagu sharaxay.
Warshad samafal, bienaal, waxay gaartaa dhererka hal mitir iyo badh. Ku tiirsan qoyska reer Asteraceae, oo ku badan gobollada koonfureed ee Ruushka Yurub, ee Siberia. Waxay u koraan sida cawska oo ay weheliyaan dhinacyada waddooyinka, beeraha khudradda. Waxaa laga helaa Argentina, Waqooyiga Ameerika, Koonfur Afrika.
Xididku waa ciriiri, adoo leh xoog xoog leh, caleemuhu waa ciriiri, dusha sare waa lanceolate, oo dhan. Qalab yar oo huruud ah oo huruud ah ayaa ku yaala weelka dhexda dhexe ee caleen.
Inflorescences qaab muuqaal ah waxay ka kooban tahay 7-12 ubax oo midab huruud ah, oo buluug ah ka dib markaad qufacdo, muuqato dhammaadkii July - horraantii Agoosto. Dhamaan ubaxa waxay leeyihiin caleemo, shan shamac.
Miraha - abuurka cagaaran ee bunni ah. Foomka - murtida, lafdhabarta. Dhinacyada wejigoodu waa cirbado toosan. Duufaantu waxay leedahay sanka dheer, oo ay ku dhamaato caarada cufan ee timaha wanaagsan.
Halkan waxaad ka arki kartaa sawirrada dhirta:
Warshadda waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Besovo caano', roodhida roodhida, salad goobta, Molokan, Kakish. Salaarada duurjoogta ah waxaa lagu beeray Masar hore, BC. Dalka Shiinaha, saladku wuxuu bilaabay in uu ku beero sidii geed lagu beeray qarnigii VII. Caleenta Leaf waxaa loo keenay Europe ee qarniyadii dhexe, maanta waxaa jira noocyo badan iyo noocyada salaar - dhir, dhogor, caleen.
Casiirka dabiiciga ah ee jilicsan waa sun, wuxuu ku jiraa qadhaadh - lactucin, lactutserin, lactucticin. Walxaha dareeraha, alkaloids ee noocyada morphine-sida, jeermarins waxaa laga helay caleemaha iyo stem. In xididada helay raad raadinta saponins.
Isticmaalka daawada, cawska la gooyay iyo casiirka caanaha. Uruurinta alaabta ceeriin ah inta lagu jiro ubax.
Geedka waxaa lagu kala saaraa haramaha kale by dheecaanka caanaha, kaas oo isla markiiba la sii daayo markii qayb ka mid ah waxyeello. Sida hadhaa ubaxa, waxaa lagu kala saari karaa lettuce dilka, kaas oo inflorescences yihiin guduud-buluug.
More noocyo kala duwan yihiin dhererka - salaarada duurjoogta ah ayaa koraa illaa 150 cm, halka qarxi - kaliya ilaa 60 cm. Laga soo bilaabo oakwood - noocyada aad dhif u ah ee ku kordhay Crimean, Scandinavia, Europe Central, salaar duurjoogta ah ayaa lagu kala duwan yahay stem upright upright.
Dubravny wuxuu ku koraa dhuun daloolo ah, jeexjeex ah, iyo caleemaha xuubka iyo strugovidnymi. Iyadoo Molokan Turjubaan ah - oo ah nooc ka mid ah noocyada la midka ah, saliida duurjoogta ah waa ay adagtahay in la isku kalsoonaado, maxaa yeelay way sii korodhaa, ubaxyadu waxay leeyihiin siyaalo kala duwan - ubaxyada duurjoogta ah ee duurjoogta ah uma muuqdaan sida buluug-buluug.
Tani waxay wejiga, si firfircoon u baabi'iyey by bannaanka, tan iyo wakhtiyadii hore loo isticmaalay daawooyinka daweynta. Uruuri qaybta geedaha ee warshadda iyo rinjiga laga helo juuska.
Qaybta kiimikada ee salaar:
fitamiino: C 40mg%, B2 0.1 mg mg, B1 0.03 mg%, P 100 mg%, B3, B6, E, B9 ayaa sidoo kale ku jira;
carbohydrates: sonkorta 0.5 - 2%, monosaccharides 1.7%, fiber 0.8%, macaanka 0.6%;
borotiinka: 0.6 - 3%;
carotenoids: carotene 1.7-6 mg, carotene beta 1, 75 mg;
qadhaadh: lactucin, lactucictin, lactutserin;
acid acids 0.1%: oxalic, citric, malic, succinic;
Maaddooyinka macdanta: potassium 300 mg, kalsiyum 57 mg, magnesium 40 mg, kobalt 4 mg, manganese 0.07 mg, zinc 0.3 mg, copper 0.14 mg, nickel 0.1 mg, molybdenum 0.03 mg, fluorine 0.07 mg;
saameynta caloosha iyo calool-gelinta.
Caleenta digaaga ah waxaa loo tixraacaa analogada daciifka ah ee laga soo koobay lo'da.
Marka burooyinka iyo carbuncles ay dalbadaan caleemaha la jajabiyey ee geedka. Dib-u-habeynta geedo daawo dhaqameed ayaa loo isticmaalay xaaladaha soo socda:
neefta gaaban iyo qufac dheer;
cadaadiska dibedda ah ee fidinta murqaha;
qaawan dhuunta xannuunka, stomatitis, cudurada loo yaqaan 'periodontal'.
Iyadoo suuxdin yar oo yar oo qadar ah laga soo qaado juuska. Waxay ka caawineysaa in ay nadiifiso suuxdinta marka:
Warshadda laguma talin in la isticmaalo daaweynta dadka qaba xanuunka iyo jooniska.
Marka uu sii xumaado cudurrada mindhicirka ee uu ku dhaco shuban, waa inaadan isticmaalin salaar.
Alaabada laga duro ee dib u habaynta geedaha ayaa sababi karta colic haddii uu jiro urolithiasis ee kelyaha.
Marnaba maahan in dadka qaba neefta futada lagu daaweeyo cawska ama caleenta salaar.
Marka la isticmaalayo dibedda, waa in la xusuustaa in hal codsi aan ka badneyn 2 g.
Xilliga xad dhaafka ah ayuu keenaa sumowga, taas oo ay weheliyaan lowska lalabo iyo daruuro miyir leh, matag.
Wixii faleebo u baahan doonaa 1 tbsp. l cawska qallalan, waa la burburiyaa.
Waxyaabaha qashinka waxaa lagu shubay 2 koob oo biyo karkar ah oo ah dhalo dhaldhalaal ah.
Tag 4 saacadood meel diiran, dabool leh dabool.
Ku shub tan dareeraha.
Qaado 1 tbsp. l kahor cuntooyinka - subaxa, qadada iyo fiidkii.
Laga soo bilaabo hurdo la'aan
Maraq waxaa laga sameeyaa casiirka caanaha la qalajiyey.
Cabbiraan 0.3 g oo ah alaabta ceeriin qallalan.
Shub 300 ml oo biyo ah.
Ku adkeyso qubeyska biyaha ilaa 40 daqiiqo.
Fiiri maraq shimbirta.
Ku dhufo biyo la karkariyey mugga asalka ah.
Daawada la qaboojiyay ayaa la sakhriyo saddex jeer maalintii 100 mg, waxayna ka caawisaa duufaanta dareenka, iyada oo aan keenin arousal bilowgii, oo aan ka ahayn opium.
Si loo yareeyo xaalada bukaanka xilliga neurosis, si loo yareeyo buufiska gudaha wuxuu noqon karaa faleebo qoyan.
1 tbsp. l Qalabka culeeya ku shub 1 koob oo biyo karkaraya.
Ku adkeyso ilaa 2 saacadood meel diiran.
Sifee faleebo adoo isticmaalaya qalfoof.
Daawada waxaa lagu qaadaa laba jeer galaas ah laba jeer maalintii.
Shuruudaha aruurinta iyo xaaladaha
Uruurinta geedka bilaabi qeybtii labaad ee xagaaga, marka ubax bilaabmaa. Si aad u hesho alaabta ceeriin tayo leh, waxaa fiican inaad ka baxdo magaalada dibaddeeda dhowr kilomitir. Ku haboon tahay ururinta cawska, koray dacha, beerta rustic ah, qarka kaynta.
Jeexaayo salaarada duurjoogta ah waa suurad wacan gacmo-galis, sababtoo ah cabitaanka caanuhu ma aha oo kaliya sunta, laakiin sidoo kale si liidata ayaa loo dhaqay kadib. Dhirta waxaa la goostay maalinta cadceeda ah, marka dhoobada horay u qalalan..
Alaabada ceeriin ee la soo ururiyey waxaa lagu dhajiyay lakab khafiif ah warqad ama dhar. Qorraxda tooska ah waa in aysan ku dhicin cawska, gudaha, waxaad u baahan tahay inaad abuurto hawo wanaagsan iyo qoyaan yar.
Iibsashada warshad caafimaad
Haddii aysan suurtagal ahayn in la soo ururiyo dhirta ama qalajiyo casiirka, farmashiyaha waxay soo iibsataa walxo cayriin ah oo diyaar ah oo loogu talagalay diyaarinta daawooyinka faafa. Qiimaha cawska dhulka lagu qiyaasay qiyaastii 70 roon 50 g.
Kala saarista casiirka dufanka dufan ee dufanka leh - rinjiga waxaa lagu iibiyaa farmashiyeyaasha qadar qiimahiisu yahay 500 ri for 5 g.
Dukaamo badan oo onlineka ah ayaa bixiya xulo ballaaran oo daawooyinka dhirta daawada. Waxyaalaha ay xiiseynayaan bixinta waxay u sahlan tahay in la iibsado dhowr fiidiyow oo aan guriga ka baxin. Iibsashada diyaarinta dhirta, u fiirso wakhtiga wax soo saarka - daawadani waxaa lagu kaydiyaa wax ka badan 1-2 sano.
Goobta ururinta ayaa sidoo kale ka ciyaara kaalin muhiim ah; meelaha xayawaanka lagu nadiifiyo waa xulashada ugu fiican ee alaabta ceeriin ee tayo sare leh. Waa inaadan ka iibsanin warshad dadka ka soo jeeda, oo ka soo baxa caqli-galinta iyo jiritaanka qiimo jaban - waxaa jira khatar ah inaad iibsato been abuur.
Dagaalka beerta leh haramaha
Haddii uu xayawaanka duurjoogta ah u muuqday beerta, waa inaad si deg deg ah ula dagaalantaa isaga. Marka uu geedka korayo, way adagtahay in la gooyo gebi ahaanba. Xitaa daaweynta ciidda guga iyo dayrta, lettuce si fudud ayaa loo naqshadeeyaa.dib ugu soo kabashada isla goobta.
Natiijo fiican waxay bixinaysaa oo kaliya burburinta nidaamka asaasiga ah, qulqulaynta nidaamsan ee warshadu waxay u oggolaaneysaa in laga takhaluso dhawr xilli. Salaarada duurjoogta ah waa mid ka mid ah noocyada casriga casriga ah ee saladhaha saladh. Inkasta oo sunta caleemaha iyo hadhka, cawska aaggaaga ay noqon karaan daroogo haddii si sax ah loo isticmaalo.